« Zoma de la Francophonie » : varotra mirakitra kolontsaina malagasy | NewsMada
« Zoma de la Francophonie » : varotra mirakitra kolontsaina malagasy
Notokanana, omaly alarobia, ny tsena « Zoma de la Francophonie » ! Tonga nitokana izany teny Andohalo, ny sekretera jeneralin’ny frankofonia, Rtoa Michaëlle Jean, sy ny minisitry ny Kolontsaina sy ny asa tanana, Andriamosarisoa Jean-Anicet. Fandaharana tafiditra ao anatin’ny fanomanana ny fandraisantsika ny fivoriamben’ny frankofonia.
Tsena nosokafana eny Andohalo izany ary mifarana anio, ahitana ireo karazam-bokatra malagasy rehetra manomboka amin’ny legioma sy voankazo, asa tanana isan-karazany, zaitra, fanafody, nahandro sakafo malagasy sy ireo sary hosodoko maro samihafa. Nandritra io fotoana io ihany koa ny nanehoana ireo kanto malagasy amin’ny lalan’ny dihy sy ny fomba amam-panao avy amin’ny faritra rehetra. Raha fintinina, varotra mirakitra kolontsaina malagasy ny « Tsena Zoma ».
Nilaza Rtoa Michaëlle Jean, sekretera jeneralin’ny frankofonia, fa fotoana tokony hohaharaotin’ny Malagasy ny hisian’io fihaonan-dehibe io, hifampiraharahana eo amin’ny sehatry ny varotra, hifanakalozana amin’ireo firenen-kafa mpikambana ny vokatry ny tany sy ny fahaiza-manao avy eto Madagasikara. « Fotoan-dehibe io hoentina hampiroboroboana ny toekarena. Fotoana hifampizarana ny fisondrotry ny harinkarena, fandraisana andraikitra ho an’ny fampandrosoana», hoy i Michaëlle Jean.
Manana ny tantarany manokana
« Tsena Zoma », mirakitra tantara maro eto Iarivo nanomboka tamin’ny andron’ny mpanjaka Andrianampoinimerina. Nalaza io andro tsena io teny Analakely, voalaza fa anisan’ny tsena lehibe indrindra maneran-tany, saingy najanona ny taona 1997 noho ny antony maro. Koa ny « Zoma de la Francophonie », ao anatin’ny fanomanana ny fandraisana ny fivoriamben’ny faha-16 hatao eto amintsika, namohazana indray izany tantara izany. Andohalo izay nametrahana izany, manana ny tantarany manokana, ohatra, ny nanambarana ny Repoblika voalohany ny taona 1958.
Betsaka amin’ireo mpandray anjara ny mitovy hevitra fa tokony mbola hitadiavan’ny mpikarakara, ny OIF, fotoana hafa ity « Tsena Zoma » ity eny Andohalo ihany, hanaovana tamberina ny lasa, indrindra hanamafisana ny fihavanana eo amin’ny samy Malagasy.